Rooble oo shir guddoomiyay shirkii ugu dambeeyay ee Golaha Was... | Universal Somali TV
Rooble oo shir guddoomiyay shirkii ugu dambeeyay ee Golaha Wasiirada
Ra'iisal Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta shir guddoomiyay kulankiisii ugu dambeeyay ee Golaha Wasiirada, kaas oo dib loogu eegay howlihii u qabsoomay xukuumaddiisa muddadii ay shaqeyneysay.
Ra'iisal Wasaare Rooble ayaa Xubnaha Golaha Wasiirada uga mahadceliyay, sidii wanaagsaneyd ee ay ula soo shaqeeyeen muddadii uu xafiiska joogay, isagoona kula dardaarmay sii wadista howlaha qaranka iyo gacan siinta Ra'iisal Wasaaraha cusub.
"Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa Xubnaha Golaha Wasiirada ugu mahadceliyay, sidii wanaagsaneyd ee ay ula soo shaqeeyeen, isagoo kula dardaarmay sii wadista howlaha qaranka iyo gacan siinta Ra’iisal Wasaaraha magacaaban iyo dowladda cusub." Ayaa lagu sheegay qoraal lagu daabacay bogga Xafiiska Ra'iisal Wasaaraha.
Kan-xigaAqalka Sare oo ansixiyay xubnaha ku m...
Kan-horePuntland oo dil ku xukuntay shan nin ...
65,220,638 unique visits